စူပါဘက်ထရီ - ဘက်ထရီဆရာဝန် & ဘက်ထရီချွေတာ APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » စူပါဘက်ထရီ - ဘက်ထရီဆရာဝန် & ဘက်ထရီ Saver
စူပါဘက်ထရီ - ဘက်ထရီဆရာဝန် & ဘက်ထရီချွေတာ APK ကို
စူပါဘက်ထရီ - ဘက်ထရီဆရာဝန် လျှောက်လွှာချွေတာနေတဲ့နေရာလေးကိုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီတိုးချဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Analyzer, ပါဝါမန်နေဂျာစမတ်အားသွင်းကိရိယာ, CPU ကို Cooler, ပုဂ္ဂလိက Browser ကိုပင်အတွက် Junk Cleaner နှင့်အတူအစီအစဉ်ကိုချွေတာတစ်ဦးကကမ္ဘာ့အဆင့်မီစွမ်းအင်။စူပါဘက်ထရီသော့ချက် features တွေ:
- ဘက်ထရီ Optimizer & ဘက်ထရီ Saver
ကို detect နှင့်အာဏာဖျန် app များကိုရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အသိဥာဏ်ဘက်ထရီ status ကိုလေ့လာဆန်းစစ်။ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးမြှင့်။ ထိထိရောက်ရောက် 25% အားဖြင့်ခြုံငုံဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အားလုံးတိုးမြှင့်ရုံတစျခုကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းပါဝါအတော်လေးဒါလွယ်ကူသောဖူးချွေတာ, ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုနှင့်အတူဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Optimizer နှင့်ဘက်ထရီချွေတာနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့!
- အားသွင်းမာစတာ - မြန်တာဝန်ခံ
အားသွင်းနေတုန်းမလိုအပ်တဲ့ app များကိုဦးသေဆုံးနှင့်အချိန်အားသွင်းသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုတက်အမြန်နှုန်း။ အားသွင်းနေစဉ်အပူပြဿနာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်, ဘက်ထရီအဆင့်ကိုအားသွင်းခြင်းနှင့်အဆင့်အတန်းကိုအားသွင်းအဖြစ်အရေးကြီးသောဖုန်းကိုအသေးစိတျ၏စည်းစိမ်နှင့်သုံးစွဲသူများအားပေးပါသည်။
- ဘက်ထရီရေးစင်တာ - ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်း
တိကျစွာဘက်ထရီအခြေအနေနှင့်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဘက်ထရီအချိန်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များ (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစသည်တို့ကိုအောင်ကစားဂိမ်းများ,) သင့်ရဲ့ device ရဲ့ဘက်ထရီကိုအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ရှာဖွေပါ။
- Scheduled ဘက်ထရီ Optimization
ဘက်ထရီတတ်နိုင်သမျှကြာကြာပြေးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်အနိမ့်အခါအလိုအလျှောက်ဖုန်းကို mode ကို switches ။ တစ်ဦးအပိုဆောင်း feature ကိုအသုံးပြုသူများသည်ဘက်ထရီကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် device ကို mode ကိုပြောင်းလဲစေမယ့်တိကျတဲ့အချိန်ကို select ပေးနိုင်ပါတယ်။
- Junk Cleaner - အခမဲ့ Up ကို Space ကို
အာကာသကိုတက်လွှတ်ပေးခြင်းနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဘက်ထရီသက်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ထားတဲ့ Junk ဖိုင်များကို, စကင်ဖတ်ဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်မယ်အားဖြင့်စက်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, cache ကို, Junk ဖိုင်များကို, ပေါရာဏ APK များနှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောဖိုင်တွေခလုတ်များကိုထိပုတ်ပါမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်!
နယူး Amazing ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ် - မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်။ ထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်, စိုထိုင်းဆ, ခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်းများနှင့်လေတိုက်အဖြစ်အားလုံးလိုအပ်သောရာသီဥတုအသေးစိတ်နှင့်အတူတိကျမှန်ကန်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်။
- ပုဂ္ဂလိက Browser ကို - ကို Safe Browsing
အလိုအလျှောက်အားလုံး browsing နဲ့ရှာဖွေရေးသမိုင်းတက်ရှငျး။ တစ်ခုတည်းသဲလွန်စချန်ထားစရာမလိုဘဲအထိခိုက်မခံသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေပါ!
- System ကိုစိတ်ကြိုက် Controller
ထိုကဲ့သို့သော Wi-Fi, လက်နှိပ်ဓာတ်မီး, ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရောင်အဝါ, GPS နဲ့ပိုပြီးအဖြစ်မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များမှလျင်မြန်စွာလက်လှမ်း။
စူပါဘက်ထရီရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျနော်တို့ကဤအသစ်က updates များကိုကြေညာရန်ဒါသည်ဝမ်းမြောက်နေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ ဘက်ထရီ optimized စွမ်းဆောင်ရည်ချွေတာ - အထုပ်အရွယ်အစားလျှော့ချပေမယ့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်
2 ။ ဘာသာစကားများကို updated
3 ။ တိုးတက်အားလုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကျော်
4 ။ မိုင်းနားကိစ္စရပ်များနှင့် bug တွေ fixed
စူပါဘက်ထရီ -Battery ဆရာဝန် & ဘက်ထရီ Saver
Hawk ရဟတ်ယာဉ် App ကို